Hello Nepal News » पहिलो छनौट खेल जितेपछि मेस्सीका तीन प्रतिक्रिया : के–के भने ?
पहिलो छनौट खेल जितेपछि मेस्सीका तीन प्रतिक्रिया : के–के भने ?
लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिनाले सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि साउथ अमेरिकी जोनबाट आफ्नो पहिलो छनौट खेल जितेको छ । आज शुक्रबार बिहान भएको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनाले इक्वेडरमाथि १–० को जित निकाल्यो । आफ्नो भूमिमा पाहुना टोली इक्वेडरमाथि कठिन जित निकाल्न अर्जेन्टिनालाई १ मात्रै पेनाल्टी गोलको मदत लिनु परेको थियो, जुन कप्तान मेस्सीले गरेका थिए ।
करिब एक वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा फर्किएका अर्जेन्टिनाका खेलाडीले घरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेनन् । उनीहरूले खेलभरिमा थोरै मात्र आक्रमण बुने भने गोलका अवसर पनि सीमित मात्रै बनाए । कप्तान मेस्सी स्वयंले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्तरको गतिलो प्रभाव छाड्न सकेनन् । आफ्नो घरमा खेल जिते पनि अर्जेन्टिना खेलभरि नै चर्को दबाबमा रहेको थियो । भलै, घरेलु टोलीले पेनाल्टी गोलकै मदतमा भए पनि खेल जितेर महत्त्वपूर्ण ३ अंक बटुल्यो ।
विश्वकपका लागि पहिलो छनौट खेल जितेपछि मेस्सीले मिडियालाई प्रतिक्रिया दिए । अर्जेन्टिनी मिडिया ‘टिवाईसी स्पोर्ट्स’ सँग कुरा गर्दै उनले इक्वेडरविरुद्ध जितको नतिजा निकाले पनि राम्रो फुटबल खेल्न नसकेको बताए । लामो समयपछि राष्ट्रिय टोलीको खेल हुँदा केही कठिनाइ भएको उनले बताए । खेलपछि उनले दिएका प्रतिक्रिया यस्ता छन्–
१. यो वर्ष निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण वर्ष थियो । हामी अहिले पनि उस्तै परिस्थितिसँग जुधिरहेका छौं । कठिन परिस्थिति र लामो समयपछि राष्ट्रिय टिमका लागि खेल्न पाउँदा हामी ज्यादै खुसी छौं । हामीले आफ्नो देशका जनतालाई फुटबलका माध्यमबाट पुनः मनोरञ्जन दिन सुरु गरेका छौं । निराशाका बीच यो निकै राम्रो कुरा हो । मलाई लाग्छ, यसले मानिसलाई सकारात्मक सोच्न सहयोग गर्नेछ ।
२. इक्वेडरविरुद्ध जितको नतिजाका साथ हामीले नयाँ यात्रा सुरु गरेका छौं । हामीलाई थाहा छ । यस क्षेत्रबाट विश्वकपका छनौट हुने धेरै नै गाह्रो छ । हामीले यस्तै खेल्छौं भन्ने मलाई लागेको थियो । किनभने, हामीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय टिममा खेलेका थिएनौं । तर, हाम्रा फ्यानले त सधैं बेस्ट प्रदर्शनको अपेक्षा गर्छन् । फ्यानहरूका लागि हामीले ३ अंक जित्यौं तर मन जितेनौं । वा भनौं, उनीहरूले अपेक्षा गरेजस्तो हामीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेनौं । म पनि यो मान्छु । किनभने, आज हामीले एक सामान्य खेल खेल्यौं ।
३. २०२२ को विश्वकपको मञ्चमा पुग्नका लागि आजदेखि हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ । हामी सबै खेल जित्न र राम्रो स्थितिबाट त्यहाँ पुग्न चाहन्छौं । आगामी सबै खेलहरू कठिन छन् । हामीले बिस्तारै सुधार गर्दै र आत्मविश्वास बढाउँदै जानुपर्छ । छनौट नहुँदा पनि हुने छुट हामीलाई छैन । किनभने, हामीसँग निकै राम्रो टोली छन् । प्रतिभावान् युवा खेलाडी छन् । हामीलाई थाहा छ, हामी आगामी खेलहरूबाट सुधार गर्नेछौं । र, अझै राम्रा नतिजाहरू हामीले प्राप्त गर्नेछौं । हामी थप मेहनतका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:३९